Daawada Aluminum Aluminium, V-Al - Goodao Technology Co., Ltd.
Daawada aluminium ee 'Vanadium' waa nooc ka mid ah walxaha horumarsan ee horumarsan oo si ballaaran loogu adeegsado aagga hawada. Daawada aluminium ee 'Vanadium' waa daawaha dhexe oo leh barta ugu yar ee dhalaalida ee 1600 ℃ (oo ay ku jiraan V40%). Waxaa badanaa loo isticmaalaa sida walxaha lagu daro aluminium ee titanium, superalloy iyo qaar ka mid ah alloysyada gaarka ah. Waxay leedahay adkaansho sare, dabacsanaan, caabbinta biyaha badda iyo fudeyd, oo loo adeegsado samaynta baalasheeda badda iyo biyo siidaayaha. Muuqaalka aluminium ee 'Vanadium' waa muuqaal bir-cawl ah oo dhalaalaya birta. Markii la kordhiyay waxyaabaha ku jira vanadium ku jira aaladda, iftiinka birta ayaa la wanaajiyay, adkaanshaha ayaa kordhay isla markaana oksijiinta ayaa kordhay.
Vanadium daawaha aluminium:
Daawada aluminium ee 'Vanadium' waa nooc ka mid ah walxaha horumarsan ee horumarsan oo si ballaaran loogu adeegsado aagga hawada. Waxay leedahay adkaansho sare, dabacsanaan, caabbinta biyaha badda iyo fudeyd. Waxaa loo isticmaalaa in laga sameeyo badda iyo biyo-biyoodka. Kaliya dhowr wadan oo aduunka ah sida Mareykanka iyo Jarmalka ayaa gaaray waxsoosaarka warshadaha.
Hore: Daawaha Aluminium ee Zirconium, Zr-Al
Xiga: Daawada birta Zirconium, Zr-Fe
Vanadium budada aluminium aluminium
Vanadium Aluminium aluminium Warshadaha
Vanadium Aluminium daawaha Warshad
Vanadium Aluminium daawaha soo saaraha ah
Vanadium Aluminium daawaha soosaarayaasha
Vanadium aluminium daawaha ah Qiimaha
Vanadium Aluminium aluminium ah Quotes